Memory Stick ၊ Flash Drive များနှင့် exe Virus ~ (IT) ကိုထိုက်
Memory Stick ၊ Flash Drive များနှင့် exe Virus
9:52 AM Memory Stick ၊ Flash Drive များနှင့် exe Virus No comments
Memory Stick၊ Flash Drive များနှင့် exe Virus
Memory Stick များနှင့် External Hard disk များကိုကွန်ပျူတာများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရာ၌ ကြုံတွေ့ရသည့် Virus များအနက် exe virus ကို command prompt အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းနည်းဖြစ်ပါသည်။
Antivirus Software Update မဖြစ်သည့်ကွန်ပျူတာများအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်ချ ရစေမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ကွန်ပျူတာတွင်အသုံးပြုသည့် Dos Command အကြောင်းကိုလည်းသိရှိနားလည်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ Flash Drive ကိုကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက် Run တွင် cmd ကိုရိုက်၍ Command Prompt သို့ဝင်ရောက်ရပါမည်။ ထို့နောက် cmd တွင် dir h:\_*.exe /a ဟုရေးသား၍ Enter နှိပ်ရပါမည်။ ၄င်း command တွင်
Dir h:\_ ၏ဆိုလိုရင်းမှာ dir သည် Folder များ၊ File များကိုကြည့်ရှူရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး h:\_ သည် ကွန်ပျူတာတွင် တပ်ဆင်ထားသော Memory Stick ၏ Drive Name ဖြစ်ပါသည်။
*.exe တွင် *. သည် Memory Stick H အတွင်းရှိ Folder များအားလုံးကို သီးသန့်ကြည့်ရှူရန်အတွက် ဖြစ်ပြီး *.exe ဟုဆိုသည့်အတွက် Memory Stick H အတွင်းရှိ exe များအားလုံးကို ကြည့်ရှူနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
/a သည် System File များကိုဖြစ်စေ၊ Hidden ဖြစ်နေသည့် Virus များနှင့် ထို Virus များ ကြောင့်Hidden ဖြစ်နေသည့် File များနှင့် Folder များကို တွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် dir h:\_*.exe /a မှာ Memory Stick H အတွင်းရှိ Hidden ဖြစ်နေသည့် exe virus များကို ဖော်ပြရန် အတွက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Memory Stick H အတွင်းရှိ exe Virus များကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ exe virus များကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် del h:\_*.exe command ရိုက်၍ Enter နှိပ်ရပါမည်။ ၄င်းမှာ Memory Stick H အတွင်းရှိ exe များအားလုံးကို Delete ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Could Not Find h:\_*.exe ဟု Drive H အတွင်း exe File များမရှိပါဟု Message ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ dir h:\_*.exe /a ဖြင့်ကြည့်ရှူစဉ်က exe File များကိုတွေ့မြင်ရပြီး ယခု Delete ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် မရှိပါဟု message တွေ့မြင်ရခြင်းမှာ Virus များမှထိန်းချုပ်ထားသည့်အတွက်ဖြစ် ပါသည်။
အဆိုပါ Virus များ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် attrib h:\_*.exe –s –r –h Command ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ ၄င်း Command တွင် attrib သည် attribute ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် File တစ်ခုကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဖျက်ဆီးမရအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ s သည် System File အဖြစ်သက်မှတ်ထားပြီး သာမန် Delete ဖြင့်ဖျက်၍မရပါ။ r သည် Read Only ဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း ရေးသားပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပေ။ h သည် hidden ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့်မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းမရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ exe virus သည် system File အယောင်ဆောင်ထားပြီး ဖျက်ဆီးမရအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိစေရန် Hidden ပြုလုပ်ထားခြင်းစသည့်ထိန်းချုပ်ထားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် – ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Virus များ၏ထိန်းချုပ်မှုကို ဖြေရှင်းပြီးနောက် exe Virus ကိုရှင်းလင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အသုံးပြု ပြီးသည့် del h:\_*.exe Command ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ ထို့နောက် Memory Stick H အတွင်းရှိ exe virus များ ကျန်ရှိနေခြင်းရှိ၊ မရှိကို dir h:\_*.exe /a ဖြင့်ကြည့်ရှူပါက exe Virus များမရှိတော့ကြောင်း တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာများအတွင်းရှိ exe Virus များကို Command Prompt ဖြင့်လွယ်ကူစွာ ရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။Memory Stick များအတွင်းရှိ exe Virus များကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Command3ကြောင်းသာလိုအပ်ပါသည်။
dir h:\_*.exe /a Virus များကိုစစ်ဆေးခြင်း။
attrib h:\_*.exe –s –r –h Virus များ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြေရှင်းခြင်း။
del h:\_*.exe Virus များကိုရှင်းလင်းခြင်း။
Credit : http://burmaitshare.blogspot.com
အခြားဖြစ်တတ်တဲ့ Newfolder.Exe Virus ဖြေရှင်းကို ဒီနေရာမှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်...။
samsung ဖုန်းတစ်လုံးကို လိုရာသုံးဖို့ အချိန်ရောက်ပ...
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး 1000GB ဆံ့ USB 3.0 flash drive
USBFlashCopy 1.9 Portable + Keygen
ooredoo မှ မိုဘိုင်းဆင်းကဒ်များကို ယခုနှစ် ဇူလိူင်...
Apple Siri နောက်ကွယ်က အသံပိုင်ရှင်
ZayPya New Version + Zapya တင်ပြီး Computer နဲ့ ဖု...
လေ့လာစရာ CPU အကြောင်း
﻿FaceBook အကောင်. ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်...
ကွန်ပျူတာထဲက Password မှန်သမျှ ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင...
Internet Download Manager 6.19 Build2Final Lates...
အော်ရီဒူး ဖုန်းကတ်တွင် မိုဘိုင်းလ် ဘဏ်စနစ် ပါဝင်မည...
Website ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာနေသူများအတွက် Wamp အားအသ...
Photo Comment ပါ ပေးလို့ရတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Faceboo...
အင်တာနက် Speed ကိုအတိအကျဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ - Intern...
ဘောလုံးကန်ကြမယ် (PES 2012)
ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်များအား ကုမ္ပဏီကိုးခုမှ ဆောင်ရွက်တေ...
Who Unfriended me on Facebook? 1.4.1 ( Facebook မှ...
Connectify Hotspot & Dispatch Pro 7.2.1.2965 ( Lap...
Analog Multimeter ဖြင့်တိုင်းတာနည်း (မြန်မာလို)
Myanmar Android Apps
Battery Doctor (Battery Saver) ( for Android )
Internet ပေါ်မှာအချိန်အားလပ်သူများအတွက် မြန်မာပြည့်...
Death Moto2( for Android )
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားမ...
ခြင်ကိုက်တာတာကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် LG လေအေးပေးစက် မတ...
Android ဖုန်း ကိုအသုံးပြု့ပြီးတော့ Video တွေကို မိ...
phone sim unlock လုပ်ချင်သူများအတွက်
မိမိ ပုံလေးတွေကို ကိုယ်ပွားပုံလေးတွေဖန်တီးဖို့ Clo...
ဖုန်းထဲက video တွေ ဓါတ်ပုံတွေကို မိမိ မှ တပါးအခြား...
ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးနေသလား၊ ဒါဆို ဒါလေးသိထားမှ ဖြစ်မယ်နေ...
Internet ထဲက HD Movies တွေကို Android ဖုန်းဖြင့်ဒေ...
WeChat App ကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ Chat လို့ရပြီ
ချစ်သူများနေ့အကြို နောက်ထပ်လက်ဆောင်တစ်ခု - My Vale...
အူရီဒူးမြန်မာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များလေ့လာ...
windows7windows 8 အထိ windows activer
ZTE ဖုန်းအားလုံးကို Root နိုင်တဲ့ All In One ZTE R...
Apple Logo မှာပဲရပ်နေတဲ့ iDevice တွေကို Advance Sa...
ကွန်နရှင်ကျနေချိန်မှာ Facebook ကိုမြန်ဆန်စွာသုံးနိ...
Computer connector များအကြောင်း
Adobe Indesign CS5 New Features (အခြေခံမှသည် ကျွမ်...
How to Create Android Application ( မြန်မာ Ebook +...
Squid Proxy ကိုအသုံးပြု၍ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို မြ...
အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားကို 200% ထိမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ...
Photography နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်များ Mediafire Link...
Who Is On My Wifi v2.2.0 (Portable)
နောက်ဆုံးထွက် အသုံးဝင် Portable Software ပေါင်း 50...
ဘယ်နိုင်ငံမဆို Phone အလကားပြောမယ် Messages အလကားပိ...